AHOANA NY FAMERENANA NY RAKITRA AO ANATY FIARA FLASH - FAMERENANA SY FAMERENANA AMIN'NY LAONINY - 2019
Tena Famerenana sy famerenana amin'ny laoniny
Ahoana ny famerenana ny rakitra ao anaty fiara flash
Ity tranokala ity dia efa niresaka momba ny fomba ahafahana manangona angona avy amin'ny haino aman-jery samihafa mampiasa ny programa Seagate File Recovery. Eto izahay dia miresaka fomba tsotra kokoa ahafahana manamboatra rakitra amin'ny flash-flash na karatra memoire, izay ahafahanao, raha azo atao, fotsiny dia ampy ny mamerina sary na lahatsary, antontan-drakitra ary antontan-drakitra hafa noho ny tsy fahombiazanao. (Azo jerena amin'ny sary rehetra ny sary sy ny sary amin'ny tsindry eo)
Jereo koa: rindrambaiko tsara indrindra momba ny famerenana data.
Ny fahatsiarovana taloha
Ohatra amin'ny famerenana sary avy amin'ny karatra fahatsiarovana
Manana kapila Memory 256 MB efa ampiasaina amin'ny fitaovana maro samihafa aho. Ankehitriny, tsy vita formata izy io, tsy azo alaina ny fidirana amin'ny votoatiny. Raha manompo ahy ny fahatsiarovako, dia tokony ho nisy sary teo aminy, izay hiezaka hamerina ho ohatra.
Hampiasa sekta fitsapana maimaim-poana aho. Badcopy proizay, raha toa ka miasa miaraka amin'ny flash USB sy ny karatra fahatsiarovana, dia mampiseho tsy fahita firy vokatra tsara. Indrindra indrindra amin'ny tranga izay ilaina amin'ny famerenana ny angona avy amin'ny rakitra, sary, horonan-tsary ary karazana endri-dàlana hafa. Ankoatr'izay, raha sendra tsy mahomby dia tsy hiova ny angon-draketranao amin'ny haino aman-jery - i.e. Azonao atao ny manisa ny fahombiazan'ny fomba fanarenana hafa.
Dingana fanarenana ny data
Mametraka karatra fahatsiarovan-tena aho, mihazakazaha ny programa ary jereo ity interface manaraka ity, izay toa mazavazava kokoa sy somary sasatra ihany:
Famerenana ny rakitra miaraka amin'ny Badcopy pro
Mifidy ny Memory Card eo ankavia sy ny taratasy mitondra fiara izay nampidirana ilay karatra, tsindrio manaraka. Etsy ankilany, ny mari-pamantarana dia ny manindry "mitady sy mamerina sary sy lahatsary fotsiny." Rehefa mikaroka azy ireo aho, dia mamela tadidy aho. Raha tsy izany dia azonao atao ny mifidy karazana fichier amin'ny dingana manaraka.
Rehefa avy mikitika "Next" ianao, dia hahita fampitandremana milaza fa ny rakitra voarakitra dia atao hoe File1, File2, sns. Afaka manova anarana izy ireo aoriana kely. Milaza koa izy fa mety ho sitrana ny karazana tahiry hafa. Raha mila izany - ireo tsotra dia mora tsotra ary mora takarina.
Fantenao ny karazan-doka ho famerenana
Noho izany, afaka misafidy izay rakitra hamerenana ianao, na azonao atao fotsiny ny manomboka ny Start mba hanombohana ny dingana. Hisy varavarankely iray hiseho izay hampiseho azy, firy ny fotoana lava sy havaozina, ary koa hoe inona avy ny rakitra naverina.
Ny famerenana sary dia dingana
Araka ny azonao jerena, tao amin'ny karatro feno fahatsiarovan-tsariko dia nahita sary sasantsasany. Azo atao ny manapaka ny dingana rehetra amin'ny fotoana rehetra ary mamonjy ny vokatra. Afaka manao izany koa ianao aorian'izany. Vokatr'izany dia nahasarika sary eo amin'ny 1000 aho, izay mazava ho azy fa somary hafahafa, mandinika ny halehiben'ny flash. Tranok'ireo rakitra ireo dia simba - ny ampahany amin'ny sary ihany no hita na tsy mivoha mihitsy. Raha azoko izany, dia misy sisa tavela amin'ny saripika tranainy, ankoatra izay zavatra voarakitra. Na izany aza dia nahavita naka sary maro aho izay efa hadinoko nandritra ny fotoana ela (ary sary vitsivitsy ihany). Mazava ho azy, tsy mila ireo tahiry ireo mihitsy aho, fa ohatra iray amin'ny asa amin'ny fandaharam-potoana, mieritreritra aho fa tsara izany.
Noho izany, raha mila haingana sy tsy misy ezaka hamerenana sary na antontan-taratasy avy amin'ny karatra fahatsiarovana na USB flash drive, ny projet Badcopy dia fomba tsara sy tsotra mba hanandrana hanao izany tsy misy tahotra ny famoahana ny mpanome vaovao.
https://termotools.com mg.termotools.com © Famerenana sy famerenana amin'ny laoniny 2019